यी जोधाहा कविता- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कविताको भाषा कठोर छ र शैली जोधाहा । तर, अनुभूतिको स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति यी कवितामा छन् ।
माघ ८, २०७८ सुमिना
एउटा आदिम चुल्ठो छ मसँग
मानव सभ्यताले बाटिदिएको
आफ्नै शिरमा लर्किरहने
नारी हुनुको परिचय बोकेको
महिला–पुरुष जैविक मात्रै नभई सम्पूर्ण रूपमै भिन्न हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आदिम समाजले संस्कार र मर्यादाका नाममा महिलाको शिरमाथि जबर्जस्ती गुथाइएको वस्तु हो– ‘चुल्ठो’ । चुल्ठोसँग निकै पुरानो सम्बन्ध छ महिला दासताको । लामो कपाल सर्लक्क कोरेर बाट्नु, शरीरभरि विभिन्न धातुका आभूषण पहिरिनु र हिँड्दा वा उफ्रिँदा असहज हुने पोसाक लगाउनु परम्परागत समाजको नजरमा साँचो अर्थमा महिला हुनु हो ।
यसको ऐतिहासिकता जोडिन्छ, पुरानो समाजसँग । दास युगमा अधिकतम मात्रामा स्त्रीहरू दास बनाइए । जब महिला सामूहिक कार्यशालाबाट घरभित्र कैद हुन थाले, उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई जकडेर नियम–अनुशासनको लगाम खिच्न पुरुषले ठूला प्रपञ्च रचे । त्यहाँ धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्पराका नाममा महिला स्वतन्त्रतामाथि ठूलै हस्तक्षेप गरियो– महिलाले यो गर्नु हुन्छ–यो हुँदैन, यहाँ जानु हुन्छ–यहाँ हुँदैन, यो लगाउनु हुन्छ–यो हुँदैन आदि इत्यादि । कवि कल्पना चिलुवालको कविता–किताब ‘चुल्ठो’ ले समाजमा स्थापित तिनै पुरातन मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न गरेको छ । कल्पनाका कवितामा आक्रोश छन्, आवेग छन्, काव्यिक कटाक्ष छन् । उनी सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारसँग आँखा जुधाएर सशक्त प्रतिवाद गर्छिन् । प्रत्येक उत्पीडन, दलन, हिंसा र शोषणको अन्त्य चाहन्छिन् । उनका कवितामा सनातनी भाषा होइन, सदियौँदेखि समाजको पीँधमा दबिएका मानिसको आवाज सुनिन्छ ।
उनी आम महिलाका मर्मसँग एकाकार छिन् । उनी कविताको औंला उठाएर शासक वर्गलाई प्रश्न गर्छिन् । उनको निडरता कतै राज्यसत्तासँग टकराउँछ त कतै जनतालाई खेलको मोहोरा बनाएर सत्तासम्म पुग्ने भर्‍याङ सम्झिने पथभ्रष्ट राजनीतिक चरित्रसँग ।
कल्पनाका कवितामा प्रश्न छन्, उत्तेजना छन्, विश्लेषण छन्, अन्वेषण छन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ, उनका कवितामा प्रेम किन छैन ? नितान्त एक प्रेमी–प्रेमिकाबीचको प्रेम नहोला, तर मानवीय प्रेम, सामूहिकताप्रतिको प्रेम, देशप्रेम र वर्गीय प्रेम उनको कवितामा भरिभराउ छन् । मार्क्सवादको वैचारिक आलोकमा प्रशिक्षित उनी वर्गीय समाजका अन्तर्विरोध खोतल्दै त्यसले माग्ने वर्गीय सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्छिन् ।
भौतिकवादी दृष्टिकोणद्वारा जीवन र जगत्प्रतिको द्वन्द्वात्मकतालाई उनका कविताले प्रस्ट भाषामा प्रतिविम्बित गर्छन् । उनी शोषक–उत्पीडकलाई वर्गीय शत्रु ठान्छिन् । सर्वहारा श्रमिकजनको आवाज बोल्छिन् । दलाल प्रवृत्ति, नवसामन्त तथा उपभोक्तावादी पुँजीवादविरुद्ध प्रतिपक्षीय भूमिकामा हुन्छिन् । ठगिखानेविरुद्ध लेख्छिन् र गरिखाने भुइँमान्छेका पक्षमा कविताबाटै ‘इन्कलाब’ बोल्छिन् ।
एउटा स्थापित भाष्य छ, ‘साहित्य समाजको दर्पण हो ।’ तर, अब साहित्य समाज बदल्ने पतिवर्तनकारी अस्त्र पनि बन्नुपर्छ । साहित्यले वर्तमानमा उभिएर भविष्यको दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ, वर्तमान समाजको उल्थासँगै भविष्यको चित्र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । साहित्यको यो भाष्य चिलुवालका कवितामा प्रयोग भएका छन् । उनका कविता वर्तमानका जटिलतालाई कसरी चिर्ने भन्ने मार्ग पहिल्याउन प्रयत्नशील छन् । कल्पनाका कविताको भाषा कठोर छ र शैली जोधाहा । तर, विलियम वर्डस्वर्थलगायतले भनेजस्तै ‘अनुभूतिको स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति’ उनका कवितामा छन् । कवि पाशको जस्तो क्रान्तिचेत र वर्गसङ्घर्षप्रेम अनि कवि कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को जस्तो निडरता र बुलन्द विद्रोही भाव छन् । भलै एकाध कवितामा कला पक्ष केही कमजोर छन् । तर, कविताले दिने सन्देश, विचार पक्ष र विषयवस्तुको उठान स्पष्ट छ ।
किताबका ‘चुल्ठो’, ‘बोक्सी जुलुस’, ‘भान्सा घर’ जस्ता केही कविता नारी हुनुको मर्मसँग एकाकार छन् र तिनले अस्तित्ववादी धार बोकेका छन् । ‘बजार’, ‘बजारको रमिताशास्त्र’ लगायतका केही कविताले केवल क्रय–विक्रयको अन्तर्वस्तु बोकेको बजारवादमाथि प्रहार गरेका छन् । ‘सरकार’, ‘भूकम्पपछिको मध्यान्तर’, ‘लाठीचार्ज, हुरी र शासक’ जस्ता कविताले शोषित तथा उत्पीडित जनताको मर्मबोध नगर्ने शासकीय प्रवृत्तिमाथि कटाक्ष गर्दै राज्यसत्ताको चरित्रलाई उदाङ्गो पारेका छन् । कतिपय कविताले परम्पराका रूपमा लादिएका अन्धविश्वास, रुढी र पुरातन संस्कारमाथि प्रहार गरी प्रगतिशील धार पछ्याएका छन् । ‘गुलाबको ट्याटु र पन्युको डाम’ कविताले बढ्दो पश्चिमा संस्कृतिको अनावश्यक सिको अनि परम्परा र संस्कृतिका नाममा दिएको घाउ, रहर र बाध्यताबीचको विरोधाभास बोलेको छ । सदियौँदेखि समाजमा बाँचिरहेको एउटा अन्धविश्वासको दृष्टान्त हो, ‘बोक्सी जुलुस’ । बोक्सी प्रथा अर्थात् पुरातन परम्पराको एउटा विकार, जसबाट आज पनि कैयौँ महिलाहरू प्रताडित छन् ।
दुःख, दर्द र पीडाको फेहरिस्त फुकाउँदै कविताले शालीन विद्रोही चेत बोलेका छन् । कवितामा निराशा भेटिँदैनन् । यी कविताले पाठकलाई उमङ्ग र ऊर्जा भर्दै जीवनप्रति सकारात्मक र आशावादी बन्न सिकाउँछन् ।
चिलुवालका कविता वास्तविकतासँग साक्षात्कार गर्छन् । सुन्दर शैली, प्रस्ट भाव यी कविताको विशेषता हो । कवि परिवर्तन पक्षधर हुन् भन्ने उनको ‘छनोट’ कविताले बोल्छ । उनले जीवनको परिभाषा दिन नदीलाई रोजेकी छन् । नदी निरन्तरताको विम्ब हो भने चलायमान हुनु नदीको विशेषता । कविले आकाशको भव्यता होइन, नदीको चलायमान पक्षसँग जिन्दगीलाई परिभाषित गरेकी छन् । उनको ‘छनोट’ भव्यतामाथि नभएर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियामाथि अडिएको छ ।
कविसँग मेरो दोहोरो सम्बन्ध छ । नारी हुनुको सम्बन्ध र कविले कविसँग स्थापित गर्ने भावनात्मक एवम् वैचारिक सम्बन्ध । शोषित, दमित र उत्पीडित वर्गको आवाज बोल्दै युगीन चेतना बोक्ने यी कवितासँग म सहमत छु र तिनले बोक्ने विचारप्रति एक्यबद्ध छु ।
आवरण परिवर्तन आवश्यक भए पनि मुख्यतया वैचारिक क्षमता र चेतनालाई बेवास्ता गरेर महिला मुक्ति आन्दोलनले सही दिशा लिन सक्दैन भन्ने बोध हुनु अत्यावश्यक छ ।
पुस ४, २०७८ सुमिना
महिला शरीरलाई विशेष महत्त्व दिनु भनेको महिला चेतना र विचारलाई ओझेलमा पार्नु हो । यसले महिला शारीरिक एवम् प्राकृतिक गुण वा अवगुणहरूका कारण शक्तिशाली या कमजोर, महान् या नीच र पूज्या या भोग्या हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्छ । साथै यसले उनीहरू शारीरिक श्रम गर्न सक्छन्, तर मानसिक र बौद्धिक ‘स्पेस’ हरूमा असफल हुन्छन् भन्ने स्त्रीद्वेषी भाष्यको पनि वकालत गर्छ ।
वास्तवमा चेतना र पदार्थको अन्तरसम्बन्ध नै समग्र मानव जीवन हो । मान्छे सबैभन्दा पहिले मान्छे हुन्छ, अनि मात्र ऊ महिला या पुरुष हुन्छ । तर, समाजमा महिला र पुरुषबीच विभाजन खिचेर एउटालाई पूर्ण मान्छे र अर्कोलाई अमान्छे घोषित गर्ने विभेदकारी परम्परा सदियौंदेखि स्थापित छ । पदार्थको जगमा उभिएको चेतनाबाट अलग्गै राखेर महिलालाई विशुद्ध शरीरधारी भौतिक अस्तित्वका रूपमा मात्रै चित्रित गर्ने परिपाटीले महिलाको वैचारिक पाटोलाई सधैं विलुप्त पारेको छ ।
पितृसत्ता र विवाह संस्था
‘परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति’ पुस्तकमा फ्रेडरिक एङ्गेल्स भन्छन्, ‘इतिहासमा एकनिष्ठ विवाहको प्रवेश विवाहको सर्वोच्च ढाँचाका रूपमा त कुरै छोडौं, पुरुष र महिलाबीच सहमतिका आधारमा समेत भएको थिएन । बरु एउटा लिंगमाथि अर्कोको उत्पीडनका रूपमा र त्यस समयसम्मको इतिहासमा कतै नभएको लिंगजन्य शत्रुताको घोषणाका रूपमा भएको थियो । सबैभन्दा पहिलो वर्गीय उत्पीडन पुरुषले महिलामाथि लादेको उत्पीडन थियो ।’
बाल्ज्याकजस्ता लेखकले महिलाको विशेषतालाई पुरुषको दिलको धड्कन बढाउन सक्ने कामुक वस्तुसँग तुलना गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘महिला त्यस्तो चलायमान सम्पत्ति हो, जसलाई पुरुषले जहाँ चाहन्छ हाँकेर लैजान सक्छ ।’ अठारौं शताब्दीमा बढ्दो प्रगतिवादी विचारधाराको प्रतिक्रियामा उनले यस्तो महिलाविरोधी घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार, बुर्जुवा विवाह संस्था प्रेममा आधारित छैन र यसैकारण त्यहाँ व्यभिचार अनिवार्य छ । यसले हरेक पतिले आफ्नी पत्नीमाथि कडा लगाम लगाउनुपर्छ, उसलाई अशिक्षित राख्नुपर्छ, सम्भव भएसम्म कुरूप बनाई सांस्कृतिक रूपमा अलगथलग तुल्याएरै अन्य पुरुषको नजरबाट जोगाउन सकिन्छ र परिवार सुरक्षित रहन्छ भन्ने मान्यताको पक्षपोषण गर्छ । उनका शब्दमा, विवाहिता महिला त्यस्ती दास हो जसलाई सिंहासनमा राख्न सकियोस्, ताकि ऊ सधैं पराधीन रहिरहोस् र चुलाचौकाको साम्राज्ञी पनि बनोस् ।
आजसम्म पनि पुरुष मानसिकतामा यही सिद्धान्तले काम गरिरहेको देखिन्छ । अधिकांश पुरुषको मान्यता हुन्छ, कुनै महिलाले आफ्नी श्रीमती भएबापत शारीरिक तथा भौतिक सुखसुविधाहरू अवश्य पाउनुपर्छ, तर घरसंसारको चौघेराबाट मुक्त भएर उसलाई बाहिरी संसारमा रुमानी उडान भर्न भने सधैं बन्देज लगाइनुपर्छ ।
हाम्रै समाजमा पनि पढेलेखेका र सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएका पुरुषहरूसमेत चाहँदैनन्, महिलाहरूमा चेतनास्तरको विकास होस् र उनीहरूको शारीरिक बनावटलाई गौण राखेर चेतनालाई प्रयोगमा ल्याइयोस् भनेर । उनीहरू चाहन्छन्, महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्किएर सामाजिक तथा वैचारिक क्रियाकलापमा संलग्न नहोऊन् । जबसम्म महिलाहरू घरभित्र सीमित हुन्छन् तबसम्म मात्रै पुरुष हुनुको अहम् सुरक्षित भएको ठान्ने पुरुषहरूको घेरा अझै व्यापक छ । श्रीमती सुन्दर देखिँदा वा उन्मुक्त भएर हिँडडुल गर्दा या अन्य पुरुषसँग हाँसबोल गर्दासमेत असुरक्षित महसुस गर्ने र शंकाले हेर्ने मानसिकता बाँचिरहनुको पछाडि महिलाका निम्ति निर्मित यिनै मान्यताहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् ।
सामन्तवादी पितृसत्ताको प्रताडनाबाट मुक्ति नपाउँदै पुँजीवाद महिलाहरूको अघिल्तिर एउटा गुलियो तर घातक ललिपप लिएर उदायो । यसले स्वतन्त्रताको छद्म सपना बाँडेर बहुसङ्ख्यक महिलालाई विषाक्त भ्रममा लोभ्याइरहेको छ । पुँजीवाद महिलाहरूको चेतनासँग प्रपञ्चको खेल होसियारीपूर्वक खेलिरहेको छ । उसको उद्देश्य चेतनालाई प्रकाशमा ल्याउनु र महिलामा निहित वैचारिकीलाई उकास्नु हुँदै होइन । ऊ त महिलालाई घरबाहिर निकाली शरीरको व्यापार चलाएर मनग्य मुनाफा कमाउने ध्याउन्नमा छ । जब शरीरलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, चेतना स्वाभाविक रूपमा ओझेल पर्छ । मुख्य आकर्षणको केन्द्र नै शारीरिक सौन्दर्य भएपछि वैचारिक स्तर निर्माण गर्नुभन्दा पनि कसरी सुन्दर देखिने र शरीरलाई आकर्षक बनाइराख्ने भन्नेमै महिलाहरूले सम्पूर्ण मिहिनेत खर्चिने हुँदा यस्तो परिपाटीले चेतनालाई शून्यमा विलय गराउँछ ।
अर्कातर्फ, शारीरिक सुन्दरता प्राकृतिक रूपमै सदाबहार नहुने हुँदा क्रमशः महिलाहरूलाई आफ्नै शरीरमाथि हीनताबोध गराई मनोरोगको सिकार बनाइरहेको छ । संसारको सबैभन्दा सस्तो विज्ञापन अनुहारको विज्ञापन र अनुहारको प्रदर्शनजस्तो कमसल प्रतिस्पर्धामा अल्झाएर पुँजीवादले फेरि पनि महिलाको चेतनास्तरलाई उठ्नै नसक्ने बनाइरहेको छ ।
महिलाहरूको वैचारिक क्षमतामा आधारित छलफल र बहस कतै भएको देखिँदैन । तर, शरीरलाई आधार बनाएर अनेक सोच भने जन्मिने गरेका छन् । तिनैमध्येका दुई अतिवादी सोच हुन्— महिलालाई प्रजनन क्षमताकै कारण शक्तिशाली हो भनेर पूज्याको दर्जा दिनु र महिनावारी वा गर्भधारण गर्ने भएकै कारण शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् भनेर हीन भावना भरिदिनु । वास्तवमा महिलाहरू शारीरिक कारणले न हिजो कमजोर थिए न आजै । बरु पितृसत्ताले प्रजनन क्षमतालाई निरन्तर महिलाको कमजोरीका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
महिला केवल शारीरिक बनोट र निश्चित अंगहरूकै कारण महिला हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै पितृसत्ताका हिमायतीहरूले महिलामाथि हुने हिंसालाई समेत प्रकृतिप्रदत्त घटना भनेर सामान्यीकरण गरी आफूमाथिको उत्पीडन र हिंसालाई भाग्य र नियतिका नाममा चुपचाप ग्रहण गर्ने मनोविज्ञान निर्माण गरिरहेका छन् । महिला उत्पीडनका निम्ति प्रकृति नभएर यो समाज उत्तरदायी छ ।
प्रकृतिले महिला र पुरुषलाई समन्वय र सहकार्यका निम्ति निर्माण गरेका केही शारीरिक भिन्नतालाई सुनियोजित रूपमा यी दुईबीच पर्खाल खडा गरी उत्पीडन लाद्ने माध्यम बनाइयो । मानवशास्त्री एभलिन रिडको अनुसन्धानले पनि महिला जैविक रूपमा कमजोर हुँदैनन् भन्ने तर्कलाई नै अघि सार्छ । ‘जीवविज्ञान महिलाको नियति होइन’ भन्ने लामो आलेखमा उनले यसबारे प्रभावशाली तर्क गरेकी छन् । मानव इतिहासको प्रारम्भदेखि नै महिलाहरू उत्पीडित रहेको भनी महिलालाई हीन ठान्ने ‘गर्भाशय सिद्धान्त’ र पुरुषलाई श्रेष्ठ देखाउने ‘लिंग सिद्वान्त’ को गलत व्याख्या–विश्लेषणलाई उनले बौद्धिक ढंगबाट चिरफार गरेकी छन् । साथै ‘सौन्दर्य प्रसाधन र महिलाको शोषण’ शीर्षक आलेखमा ठूला व्यवसायीहरूले धेरै नाफा कमाउन महिलालाई कसरी उपयोग गर्छन् र श्रमिकहरूमाथिको उत्पीडनलाई टिकाइराख्छन् भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरेकी छन् ।
एक थरी महिलाहरू सौन्दर्य प्रसाधन र फेसनले बाहिरी व्यक्तित्वलाई सुधार गर्ने हुँदा यसको प्रयोग आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् भने अर्का थरी इच्छाअनुसारको पोसाक र सौन्दर्य प्रसाधनको उपयोगलाई महिला अधिकारसँग जोडेर हेर्छन् । यसको बाछिटाले नेपालको महिला आन्दोलनसमेत भिजेको देखिन्छ । नेपाली महिला आन्दोलनमा पनि महिलाहरूमा निहित बौद्धिक सक्षमतालाई लिएर खासै बहस भएको पाइँदैन, बरु शारीरिक तडकभडक र लवाइखवाइलाई ‘सेल्फ कन्फिडेन्स’ सँग जोडेर तर्क गर्ने गरिएको छ । तर, आजको पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा सौन्दर्य प्रसाधन महिलाको अधिकार र आवश्यकताभन्दा पनि बाध्यतामा परिणत भइरहेको यथार्थबारे खासै चिन्ता गरेको देखिँदैन । मुख्यतया वैचारिक क्षमता र चेतनालाई बेवास्ता गरेर महिला मुक्ति आन्दोलनले सही दिशा लिन सक्दैन भन्ने बोध हुनु अत्यावश्यक छ ।
शरीरकेन्द्रित घातक सौन्दर्यचेत
शरीरकेन्द्रित गलत सौन्दर्यचेतले विविध हिंसाका अवयवहरूलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ । यौनांगधारी कामोत्तेजक वस्तु देख्ने मानसिकताले दिनहुँ यौनहिंसा र बलात्कार बढाइरहेको छ । यही मानसिकता बोकेको समाजको एउटा हिस्सा छोटो कपडा र अंग प्रदर्शनकै कारण महिला बलात्कृत हुने कुतर्क पेस गर्छ । महिला शरीरमा त्यस्तो के छ, जसले पुरुषलाई एकाएक मान्छेबाट अपराधी बनाउँछ ? यो महिला शरीरप्रतिको अतिरञ्जित र गलत सौन्दर्यचेतकै परिणाम नभए के हो ?
विवेकशीलतालाई ललकार्ने र शरीरधारी वस्तु मात्रै देख्ने प्रवृत्तिले जब महिलालाई घृणा गर्छ तब अंगमै प्रहार गर्छ । सक्षमतामाथि सन्देह व्यक्त गर्दै महिलाको सफलताका पछाडि पनि शारीरिक प्रदर्शन मात्रै देख्छ र चरित्रलाई उसमाथि प्रहार गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छ । यस्ता खाले प्रवृत्तिबाट सत्तासीनदेखि विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध तथा पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने र लेख्ने महिलाहरूसमेत प्रताडित छन् ।
अरस्तु भन्छन्, ‘महिला केही प्राकृतिक गुणहरूको कमीकै कारण महिला बन्छे ।’ प्लेटो ईश्वरले आफूलाई पुरुष बनाउनुलाई अहोभाग्य मान्छन् । पाइथागोरस महिलालाई अशुभ सिद्धान्तसँग तुलना गर्छन् । यसरी इतिहासदेखि नै पुरुष श्रेष्ठतावादीहरूले केही भिन्न गुण एवम् जीव वैज्ञानिक संरचनाकै कारण पहिलाहरू कमजोर तथा हीन हुने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । तर यो भाष्य आफैंमा तथ्यहीन रहेको तर्क लुइस हेनरी मोर्गन, फ्रेडरिक एङ्गेल्स, एलभिन रिड आदिले निजी सम्पत्ति र एकनिष्ठ विवाह पद्धतिमा आधारित पितृसत्ताको उदयभन्दा अघिको समाजका महिलाहरूको सामाजिक अवस्थाको अध्ययनमार्फत गरेका छन् ।
मातृप्रधान समाजको पतनसँगै सुरु भएको पितृसत्तामा महिलाहरूलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट अलग्याएर घरभित्रै सीमित गर्न निर्माण गरिएको चिन्तन नै समस्त उत्पीडनको जड हो । त्यहीँबाट सुरु भएको हो, दोस्रो दर्जाको नागरिक करार गरी महिलाहरूको मस्तिष्क र चेतनामाथिको नियन्त्रण । सामन्तवाददेखि पुँजीवादसम्म महिला उत्पीडनको सवाल शरीरदेखि शरीरसम्मै पुगेर कैद भएको छ ।
अब पुँजीवादको पन्जाबाट निस्किएर शारीरिक प्रतिस्पर्धाको मोहजाल त्याग्दै ठूलो संख्यामा महिलाहरू आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र वैचारिक हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक वर्चस्व कायम गर्दै र शताब्दियौंदेखि नियन्त्रणमा राखिएको मस्तिष्कका लक्ष्मणरेखाहरू तोड्दै वर्जित गरिएको वैचारिक यात्रामा लामबद्ध हुनु आवश्यक छ । हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी वैचारिक लडाइँमार्फत पितृसत्ताको शरीरकेन्द्रित झाष्य खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित : पुस ४, २०७८ ०८:१५